Dowladnimada Soomaaliya oo micno beeshay iyo kalsoonidii Beesha Caalamka oo luntay – Somali Top News
April 4, 2019 April 4, 2019 Somali Top News	0 Comments
Kalsoonidii lagu qabay Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa hoos u sii dhaceysa kadib markii Guuldaradeeda Gudaha iyo Dibadda ay noqdeen kuwa isbada joog ah oo aan ladaba qaban.
Dowladnimada oo ah nidaam shaqo oo isku xiran islamarakana hiigsi leh ayaa noqday mid hadaan dheer lagu tuuray kadib markii shaqsiyaadka madaxda ay ka doorbideen saaxiibtinimo iney dowlad nimada ku hogaamiyeen iyadoo aysan jirin wax isla xisaabtan ah.
Siyaasadda Dowladda Federalka ay ku wajaheyso Gudaha dalka ayaa noqotay mid uu ka muuqdo shaqo guadasho la’aan iyo nidaam xumi iyadoo iyadoo markii 6-aad sanadkii 2018 ay Soomaaliya noqotay dalka ugu musuqa badan.
Sidoo kale xukuumadda uu hogaamiye Ra’isul Wasaare Kheyre ayaa meesha ka saartay in shaqo joojin ama xil ka qaadis lagu sameeyo shaqsiyaadka ku fashilmay howlaha dowladda u igmatay tusaale ahaan Fahad Yaasiin oo madax ka ah taliska NISA wuxuu ku fashilmay in sirdoonka uu howlgeliyo si looga hortago dhibaatada argagixisada, iyo Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo gabi ahaanba la moodo in shaqada laga joojiyay marka la eego fashilka isdaba jooga ah ee laamaha amniga iyo khatarta Al shabaab oo sii korortay.
Waxaa kaloo jirta in dowladan ay joojisay adeegyadii Bulshada oo dowladihii dalka soo maray laga heli jiray sida waxbarashada iyo caafimaadka iskaba daa iney aas aastee waxey burburisay goobo shacabka u doonan jireen adeegyo caafimaad.
Wadashaqeynta maamul Goboleedyada oo luntay, ciidamadii dowladda oo xaaladda ku xumaatay, dhalinyaradii Bajaajleyda oo maalin walbo lagu dilayo Isgoysyada Muqdisho iyadoo aan wax talaab ah laga qaadeyn askarta caadeesatay dilka umadda.
Sidoo kale Kalsoonidii Beesha Caalamka ayaa gabi ahaanba luntay sida Qaramada Midoobay, Midowga Yurub, ururka Jaamacadda Carabta iyo hay’ado dhowr ah oo Soomaaliya ka taageeri jiray dhinacyo kala duwan.
Sababta ugu weyn ee dowladdan dhulka u gashay ayaa ah been farabadan iyo balanqaadyo aysan waxba ka rumooyin.
Waxyaabaha ugu waa weyn oo dowladan ku fashilmatay waxaa kamid ah dagaalka Al shabaab, xoreynta dalka, Nabadeenta Caasimadda, soo daabicidda lacag cusub oo Soomaali ah.
Xaaladda amni ee dalka ayaa sidoo kale sii xumaaneysa maalinba maalinka ka dambeyso, dilalka iyo qaraxyada ayaan kala joogsi laheyn iyadoo wadooyinka ay xiran yihiin balse dowladda la ogaaday iney la shaqeysato Al shbaab si mashruucyo lacag leh loogu helo arrimaha amniga.
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir Eng Yariisow waxa uu noqday fadhiid aan qaban wax hool ah, sidoo kale daawada shacabka lagu hor xasuuqayo iyo ciidamada dowladda ee caadeestay inay shacabka dilaan iskaba daa in uu Xamar horumariyee.
Waxaa luntay aaminadii iyo kalsoonidii lagu qabay Madaxweyne Farmaajo waxaana sabab u ah Ra’isul wasaarihiisa Kheyre oo shaqada dowladda ku soo koobay: Faan, Been badan iyo balanqaadyo aan waxba ka fulin.
← Wasiirka Maaliyadda oo shirka Horumarinta Bankiga Islaamka kaga qeyb galay dalka Morocco
Dowladda oo ku amartay shirkadaha Isgaarsiinta dalka iney isku furan qadadka Telefoonada →
March 3, 2019 March 3, 2019 Somali Top News 0